၀ယ်သူတွေရဲ့ ငြင်းပယ်မှုတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ? - Better Version
June 25, 2020 2020-06-25 11:25
အရောင်းသမားတိုင်းနဲ့တွဲနေတာ အငြင်းခံရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်းသမားဖြစ်လာပြီ ဆိုရင် ၀ယ်သူတွေရဲ့ မယူသေး ဘူး နော်၊ ဈေးကြီးလို့ပါ၊ အခုတော့မလိုသေး လို့ပါ၊ နောက်မှပြန်လာမယ်နော်၊ စတဲ့ ငြင်းပယ်မှုတွေကို မလွှဲမသေ ကြုံ တွေ့ရမှာပါ။ ကိုယ်ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတိုင်း၀ယ်ကြတာမှ မဟုတ်တာဗျာ။ အဲ့ဒီအခါ စိတ် ဓာတ်မကျပဲ ဘယ်လို အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ ကျော်ဖြတ်မလဲဆိုတာ က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်က ငြင်းပယ်တာတွေကို ဘယ်လို အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ ကျော်ဖြတ်သင့်တယ်ဆိုတာ အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ဒီနည်းတွေကို သုံးပြီးဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ ရောင်းရနိုင်ခြေပိုတက်တာပေါ့ဗျာ။
၁) ငြင်းပယ်မှုတွေကို ကြိုတင်စဉ်းစားပါ။
အရောင်းသမားတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်၀ယ်သူတွေနဲ့ အတွေ့ခင် အရင်ဆုံး ငါရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းကို မ၀ယ်တော့ဘူးငြင်းတဲ့ အခါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ မျိုးကိုကြိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လို အခြေအနေမှာ ဘယ်လိုပြောပြီး ငြင်းတတ်သလဲဆိုတာ ကြိုလေ့လာထား ရပါမယ်။ ပြောချင်တာက do your homework ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့် product ရဲ့ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်၊ ပါ၀င်တဲ့ အင်္ဂါရပ်( feature), ဒီ အင်္ဂါရပ်ကြောင့်ရမယ့် အကျိုးရလဒ် (benefit) ကိုကောင်းကောင်းသိအောင်လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ အခြားကိုယ့် competitor နဲ့ ယှဉ်ရင် ကိုယ့် product မှာ ဘာအားသာချက်ရှိလည်း ဘာ အားနည်းချက်ရှိနေလဲပေါ့။
ဉပမာဗျာ ‌ဈေးကြီးတယ်ဆိုပြီးငြင်းတယ် ဆိုပါစို့။ ကိုယ်က ကိုယ့် product အကြောင်းသေချာသိတယ် ဆိုရင် ဟုတ်ကဲ့ ဒီ product နဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ purchase price က ဈေးများကောင်းများနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရေရှည်သုံးတဲ့ အခါ မှာ သက်သာ မဲ့စရိတ်ကို တွက်ပြတာမျိုး၊ ပိုသာတဲ့ benefit တွေကို မြင်အောင်ပြောပြတာမျိုး။ ဒီလိုသေချာချိန် ထိုးရှင်းပြနိုင်ဖို့ ကိုယ့် product အကြောင်း၊ ဈေးကွက် (market)အကြောင်း ကိုသေချာသိမှ ရမှာပါ။
၂) နားထောင်ပါ ဖြတ်မပြောပါနဲ့။
ဘ၀မှာ ကိုယ်ပြောတာတွေကို သေချာနားမထောင်နေဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်လောက် ဆိုးတာရှိသေးလားဗျာ။ ပြီးတော့ လူတွေက ကိုယ်စကားပြောတဲ့အခါ ကြားထဲက ဖြတ်ပြောတာမျိုးကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ကိုယ်ပြောတာမှားနေလို့လား? ကိုယ်ပြောနေတာကို စိတ်မရှည်တာလား? စသဖြင့်မကြိုက်ပါဘူး။ အတွေ့ အကြုံရှိတဲ့ အရောင်းသမားတွေအနေနဲ့ ၀ယ်သူပြောတာကို လေးလေးစားစား နားထောင်ပေးမယ်။ ပြီးမှ သူ မရှင်းတာ၊ နားလည်မှုလွဲ နေတာတွေကို သေချာရှင်းပြပေးမယ်ဆိုရင် ချက်ချင်း ကိုယ်ဆီက မ၀ယ်ဘူးဆိုရင်တောင် သူ့စိတ်ထဲမှာ သူ့ကို အလေးထားတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ရပြီး ၀ယ်နိုင်လာတဲ့ အချိန်၊ လိုအပ်လာတဲ့ အချိန်မှာကိုယ့်ဆီက နေ၀ယ်ဖို့စဉ်းစားမှာပါ။
၃) ၀ယ်သူတွေငြင်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုလက်ခံပေးပါ ပြီးရင်တစ်ခု ချင်းသေချာရှင်းပြပေးပါ။
၀ယ်သူတစ်ယောက်က ကိုယ့် product နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အကြောင်းပြချက်တစ်ခု ခုပေးပြီးငြင်းတဲ့ အခါသူပြောနေတာကို အတင်းအတိုက်အခံမလုပ်ပါနဲ့။ လက်ခံပေးပါ။ ဟုတ်တယ် အကို/ အမ ဒီလိုယူဆနေတာမလား အဲ့တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ… ဆိုပီး ရှင်းပြပါ။ Yes….. but နည်းပေါ့ဗျာ။ တစ်ပါးသူရဲ့ idea ကိုလက်ခံ ပေးတာက သူ့ကို လေးစားကြောင်း ပြတာတစ်ခုပါပဲ။ သူပြောတာ ကိုလက်ခံပြီး နောက်မှ တစ်ခုချင်းဆီ သင့်တော်တဲ့ အဖြေနဲ့ ရှင်းပြချက် ရှိရမှာပါ။
၄) ဘာကြောင့်ငြင်းရသလဲဆိုတာ မေးပါ။
ကိုယ့်ပစ္စည်းကို မ၀ယ်တော့ပါဘူး လို့အငြင်းခံရတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘာ့ကြောင့် လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုတော့ မေးသင့်ပါတယ်။ ဘယ်အချက်ကအဆင်မပြေတာလဲ၊ ဘယ်အချက်ကိုမကြိုက်တာလဲ။ ဉပမာဗျာ သင်တန်းဆိုပါတော့ မတက်တော့ပါဘူး လို့ငြင်းတဲ့ အခါဘာကြောင့် မတက်ဖြစ်တော့တာလဲ။ အချိန်အဆင်မပြေတာလား? ဈေးကြောင့်လား? စသည်ဖြင့်ပေါ့ ဗျာ။ မေးခွင့်ရှိပါတယ် ၊ မေးလည်းမေးသင့်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတိုးတက်ရေးအတွက် information ရတာပေါ့ဗျာ။ နောက်တစ်ခါသွားရောင်းတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုအချက်တွေက အဆင်မပြေဖြစ်တတ် တယ် အငြင်းခံရတယ် ဆိုတာသိသွားတာပေါ့။
Buyers buy from their friends, not their enemies တဲ့
လူတွေက ကိုယ်ယုံတဲ့သူ၊ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့သူ ဆီကပဲ ၀ယ်တယ်ဗျာ။ ဘယ်သူမှ ကိုယ်မယုံကြည်နိုင်ဘူးလို့ယူဆရတဲ့သူ၊ ကိုယ် နဲ့ အဆင်မပြေတဲ့သူဆီက မ၀ယ် ပါဘူး။ မယုံဘူး ဆိုတဲ့နေရာမှာ တစ်ခုက ကိုယ့် ထုတ်ကုန် (product) ကိုမယုံတာ၊ တစ်ခုက အရောင်းသမားကို မယုံတာ အရင်တုန်းက ဂျင်းထည့်ခံခဲ့ရတာတို့ ဘာတို့ပေါ့ဗျာ၊ တစ်ခု က ကုမ္ပဏီ ကိုမယုံတာ၊ အဲ့တာမျိုးတွေရှိမယ်ဗျာ။ ဒါတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရမှာပေါ့။ ကိုယ့် product ကို သူစိတ်မချဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေလား၊ ကိုယ်လည်းအဆင်ပြေမယ် ဆို အစမ်းပေးသုံးခိုင်းမယ်ဗျာ၊ ကိုယ့် ကုမ္ပဏီ ကို သူမယုံတဲ့ အနေအထားလား၊ ကိုယ့် ကုမ္ပဏီ ရဲ့ Success Stories တွေကို share ပေးမယ်ဗျာ၊
ဉပမာ- ကိုယ့်ရဲ့ အရင် ၀ယ်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံချက်တွေ၊ မှတ်ချက်တွေ (reviews) တွေ ကိုမျှ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ဝေ ပေးမယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ အရောင်းသမားတွေအနေနဲ့လည်း ယုံကြည်ထိုက်တဲ့ သူဖြစ်အောင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (physical appearance) မှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် (neat and tidy) ဖြစ်မယ်၊ ဝယ်သူရဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျတဲ့ အရည်အသွေး၊​စိတ်နေသဘောထား၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု နဲ့ ဗဟုသုတ (knowledgeable personality) လည်းရှိမယ် ဆိုရင် ၀ယ်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ကောင်းကောင်း တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ အခါ သူ့မှာ ငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ချက်ချင်း မ၀ယ်သွားဘူးဆိုရင်တောင် သူလိုအပ်လာတဲ့ အချိန် မှာ ကိုယ့်ဆီမှာလာ၀ယ်တာ၊ အခြားသူ့မိတ်ဆွေတွေလိုအပ်လာတဲ့ အခါ ကိုယ့်ဆီမှာ၀ယ်ဖို့ ညွှန်းတာ၊ တိုက်တွန်းတာ စတဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေရမှာပါ။
ဒီနည်းတွေကိုသုံးပြီး ငြင်းပယ်မှုတွေကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းရင်းနဲ့ ရောင်းအားကောင်း၊ ရလာဒ်ကောင်းတဲ့, ထိပ်တန်းအရောင်းသမားတွေဖြစ်ဖို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Better Salesman သင်တန်းမှာတော့ Handling objection ကို သင်ခန်းစာတစ်ခု အနေနဲ့ သင်ပါတယ်။